Illlọ ọrụ Twill - China Twill Manufacturers, Suppliers
SS Medical Ọ dịghị onye kpara akwa
Medical Ọ dịghị onye kpara akwa
Pp + Pu echebe Cloth Fabric
Pp Spunbond Nonwoven ákwà
N'ịnọgide n'echiche nke "Creatmepụta ngwaahịa nke elu ugwu na inweta ndị di na nwunye taa site n'akụkụ ụwa niile", anyị na-etinye ọchịchọ nke ndị na-azụ ahịa oge niile maka Twill,,,, Ahịa afọ ojuju bụ isi ebumnuche anyị. Anyị na-anabata gị ka gị na gị nwee mmekọrịta azụmahịa. Maka ozi ndị ọzọ, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Ọganihu anyị na-adabere na ngwaahịa ndị dị elu, nkà ndị dị egwu na ike na-eme ka nkà na ụzụ na-aga n'ihu maka Twill, Ahụmịhe ọrụ n'ọhịa enyerela anyị aka ịmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị ahịa na ndị mmekọ ma n'ime ụlọ na mba ụwa. Ruo ọtụtụ afọ, ngwaahịa anyị na ngwọta anyị ebupụla karịa mba 15 na ụwa ma ndị ahịa na-ejikwa ya.
Twill bụ ụdị akwa textile nke nwere akwa nke ọgịrịga nke diagonal (nke dị iche na satin na akwa larịị). A na-eme nke a site na ịgafe eriri ahịhịa gafere otu eri ma ọ bụ karịa wee banye n'okpuru eri abụọ ma ọ bụ karịa na ihe ndị ọzọ, yana "nzọ ụkwụ" ma ọ bụ dechapụ n'etiti ahịrị iji mepụta njirimara diagonal.
Ugboro abụọ Fabric -S20170302
Ugboro abụọ Fabric-S20160065
Ugboro abụọ Fabric-S3036
Ugboro abụọ Fabric-S2944
Ugboro abụọ Fabric-S2857
ITwill bụ ụdị akwa textile nke nwere ụdị ọgịrịga nke diagonal (nke dị iche na satin na akwa larịị). A na-eme nke a site na ịgafe eriri ahịhịa gafere otu eri ma ọ bụ karịa wee banye n'okpuru eri abụọ ma ọ bụ karịa na ihe ndị ọzọ, yana "nzọ ụkwụ" ma ọ bụ dechapụ n'etiti ahịrị iji mepụta njirimara diagonal.
Ugboro abụọ Fabric-S2856
Ugboro abụọ Fabric-S2742
Ugboro abụọ Fabric-S2552
Ugboro abụọ Fabric-S2070
Ugboro abụọ Fabric-S1915mt
Ugboro abụọ Fabric-S1594